ICasale San Martino ifama yeFama yeBio Phezulu
Ifumaneka embindini weenduli zeMarche kunye nesakhelo seeNtaba zeSibillini, "iCasale San Martino" yikona yoxolo, ijikelezwe ngumhlaba wobunikazi okhule ngokwasemzimbeni kunye nentendelezo ebiyelweyo.
Indlu yasefama yindawo enobuchule phakathi kweentaba kunye nolwandle, imizuzu engama-20 ngemoto ukusuka kwiindawo zokuchithela i-ski kunye nemizuzu engama-40 ukusuka kuLwandle lwe-Adriatic.
Ukusuka kwi-panoramic terrace uyakwazi ukubona ubuhle bendawo ephefumlayo.
Indlu yasefama isandula ukwakhiwa ngokutsha ngokwemigaqo echasene nenyikima.
Ifulethi lonke lizimele ngokupheleleyo kwindawo yangaphakathi nangaphandle.
Ifakwe entliziyweni yeenduli eziluhlaza zeMarche kunye nesakhelo seeNtaba zeSibillini, indlu yasefama ephilayo "iCasale San Martino" yikona yokuzola ezolileyo, ejikelezwe ngumhlaba ophethwe yinkampani elinywa ngokwemvelo kunye nentendelezo enkulu ebiyelweyo. iindawo eziluhlaza, imithi yehlabathi, imithi yeziqhamo, iibhedi zeentyatyambo kunye negadi yemifuno.
Indlu yasefama ikwiikhilomitha ezi-4 ukusuka kumbindi welali yaseSant'Angelo ePontano, indawo ecwangcisiweyo phakathi kwentaba kunye nolwandle, umgama wemizuzu engama-20 ukusuka kwindawo yokuphumla yaseSarnano kunye nemizuzu engama-40 ukusuka elwandle lwasePorto San. Giorgio, Porto Sant'Elpidio kunye Civitanova Marche.
Ipropathi ilungele abo bafuna iholide ekunxibelelaneni nendalo, kulabo bafuna ukunandipha ilanga kunye nokuphumla kwi-panoramic terrace ye-100 square metres, exhotywe nge-solarium kunye netafile yokutya. Ukusuka apha kuyenzeka ukuba ubukele ubuhle obumangalisayo apho, phakathi kwamasimi alinywayo kunye nemithi, iilali ezingaphezulu kweshumi zaseMacerata hinterland zigqamile, zizityebi kwimbali, ubugcisa kunye nobugcisa.
I "Casale San Martino" wazalwa ukusuka ingcamango lokubamkela iindwendwe zethu kwi ndlu indala yasefama kutshanje sakhiwe ngokuvisisana nemilinganiselo anti-wenyikima, ngokuhlonipha isithethe wokwakha ilizwe lethu ngeendonga ngamatye, iisilingi kunye ngemiqadi somthi kungafihlwa yaye imigangatho ku iphekwe .
Ukwakhiwa komgangatho wokuqala ozimeleyo wokuhlala: igumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi lokulala elinesithathu, ikhitshi, igumbi lokuhlala kunye negumbi lokuhlambela elipheleleyo elinomatshini wokuhlamba. Ukufikelela kwi-panoramic terrace.